News Collection: फेसबुकमा कलाकार
"अभिनेता नीर शाह जोगी भएर गए हुन्छ।" आफैँले अभिनय गरेका चलचित्रसमेत आफूले नहेर्ने गरेको भन्दै शाहले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाकाहाकी बोलेपछि एक जना नयाँ निर्देशकले फेसबुक -इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जाल)मा यस्तै लेखिदिए। निर्देशक सुरेशदर्पण पोखरेलले गरेको यो व्यंग्यमिश्रति प्रतिक्रियाबारे फेसबुकमै पक्ष र विपक्षमा विभिन्न कलाकार, पत्रकार र चलचित्रप्रेमीहरूले आ-आफ्ना मत 'पोस्ट' गरे।
नेपाली चलचित्रकर्मीमा फेसबुकप्रेम ह्वात्तै बढेको छ। फेसबुकमा आफ्नो 'स्टासट' बदलिरहने निर्माता तथा निर्देशक युवराज लामादेखि 'अकाउन्ट' खोलेर अहिलेसम्म एकपटक पनि आफ्नो 'स्टाटस' अद्यावधिक नगर्ने अभिनेता शिव श्रेष्ठसम्मले पनि इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्िथति जनाएका छन्।
फेसबुककै कारण कतिपय कलाकारले आफ्ना निजी अनुभव र अनुभूति सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। विभिन्न विषयवस्तुप्रतिको दृष्टिकोण, अरूका धारणा र अवस्थाप्रतिका प्रतिक्रिया मात्र होइन, आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी दिन पनि चलचित्रकर्मीहरूले फेसबुकको उपयोग गररिहेका छन्। हालै मात्र युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि अभिनेतृ ऋचा घिमिरेले पटक-पटक त्यहाँका अनुभव र तस्िबरहरू फेसबुकमा 'अपलोड' गरनि्। ऋचा भन्छिन्, "आफन्त, प्रशंसक र साथीभाइ सबैलाई जानकारी दिन र आफ्ना अनुभवलाई अरूसम्म पुर्‍याउनका लागि फेसबुक गज्जबको माध्यम रहेछ।"
चलचित्रवृत्तबाट ओझेल परेका वा पलायन भएका कलाकारहरूका बारेमा जानकारी पाउन प्रशंसकहरूलाई फेसबुक गतिलो माध्यम बनेको छ। बितेका केही महिनायता कलिउड छाडेर बलिउडतिर लागेकी अभिनेतृ उषा पौडेलको अत्तोपत्तो नपाएका उनका प्रशंसकहरूले एकैपटक फेसबुकमार्फत केही जानकारी पाए। एक महिनाअघि मात्रै उषाले आफ्नो 'वाल'मा लेखेकी थिइन्, "अहिले म मुम्बईमा छु। एउटा सिरयिलका लागि अडिसनको तयारी भइरहेको छ।" अडिसन कस्तो भयो भन्नेबारे भने उषाले अहिलेसम्म कुनै सूचना 'अपडेट' गरेकी छैनन्। युरोप तथा अमेरिका पलायन भएका कलाकारहरू पनि फेसबुकमार्फत यहाँका कलाकारसँग पुनःमिलन गर्दैछन् ।
कुनै बेला अंग्रेजी भाषामा दक्ष कलाकर्मीको अभाव महसुस गथ्र्यो चलचित्र क्षेत्र। तर, पछिल्ला दिनमा अधिकांश कलाकारले आफ्ना फेसबुकमा अंग्रेजी भाषामै लेख्न थालेका छन्। पछिल्लो समय फेसबुक नजान्ने वा त्यसमा अभ्यस्त नभए पछाडि परनिे पो हो कि भन्ने सोच्न थालेका छन् कतिपय कलाकारले। जस्तो शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी, विराज भट्ट आदि। उनीहरूले फेसबुक त खोलेका छन् तर त्यसमा कहिल्यै 'अपडेट' गरेका छैनन्। नायिकाहरूको हालखबर पनि त्यस्तै छ। कतिपय चलेका कलाकारले फेसबुक खोल्नेदेखि अपडेट गर्नेसम्मको जिम्मा अरूलाई नै दिएको कुरा पनि सुन्न पाइन्छ, कलाकर्मीमाझ।
फेसबुकमा कति साथी बनाइयो ? हरेकले दिने जवाफ हो, "नियमित रूपमा बस्न पाएको भए धेरै हुन्थे।" यति भएर पनि कलाकर्मीहरू उल्लेख्य रूपमा साथी बनाउन सफल छन्। तीन-चार हजार साथी हुने चलचित्रकर्मीको संख्या एक दर्जनजति छ।
फेसबुकलाई कसरी उपयोग गररिहेका छन् कलाकारहरूले ? अपवादलाई छोडेर आमकलाकर्मी आफ्नै फोटो राख्ने, आफैँले अभिनय गरेको चलचित्रको समाचार र सुटिङ्मा भएका कुरा लेख्नेमा सीमित छन्। आफूभन्दा बाहिर गएर समाचार दिने कलाकर्मी न्यून छन्। राजनीतिक टीका-टिप्पणी त परै जाओस्, आफू असम्बन्धित रहेका चलचित्रका बारेमा समेत उनीहरू लेख्न रुचाउँदैनन्। नायिका अरूणिमा लम्सालले त आफ्नो फेसबुकमार्फत पटक-पटक हिन्दी चलचित्र हेर्न आग्रह गरेकी छन्। गोलमाल हेर्नु, दबंग हेर्नु, क्लासिकल हिन्दी फिल्म हेरेर मनोरञ्जन लिनूस्, हिन्दी चलचित्र हेर्नूस्जस्ता सल्लाह दिएर बसेकी छन् उनी।
ऋचाले हङ्कङ्मा हलिउड चलचित्रको छायांकन हेरेको अनुभव पनि राखेकी छन्। उनी आफ्नो प्रचार गर्न पनि सिपालु छन्। उनले निर्माण गरेको चलचित्र वीरताको चिनो स्कटल्यान्डमा राम्रोसँग चलेको समाचार पनि लेखेकी छन्। ऋचाका पति निर्देशक शंकर घिमिरे पनि अपडेट छन्, फेसबुकमा। उनीहरूका धेरैजसो कुरा मिल्दाजुल्दा हुन्छन्।
वालमा एक वा दुई शब्द लेख्ने कलाकार बढी छन्। जस्तो नायिका करश्िमा मानन्धर। उनले तिहारको शुभकामना दिएकी छन्। त्यसअघि दसँैको। उनले लामो लेखेको भनेको एउटा राजनीतिक टिप्पणी हो। "राजनीतिक अस्िथरता लम्बियो।" लामा-लामा चलचित्र लेख्ने ब्रजेश फेसबुकमा छोटकरीमा प्रस्तुत हुन्छन्। उनले पछिल्लोपटक राजनीतिक समाचारमाथि यसरी व्यंग्य गरेका छन्, "अध्यक्ष मण्डल चाहियो रे !"
फेसबुकमा आफ्नो अनुभव धेरै राख्नेमा नायक राजबल्लभ कोइराला अगाडि छन्। सुटिङ्का क्रममा पुगेका ठाउँको फोटो, यात्रा अनुभव, भोगाइदेखि विज्ञप्ति पाराका स्पष्टीकरण पनि दिन छुटाउँदैनन् कोइराला। दसँै-तिहारको शुभकामना, बिरामी कलाकार गोपाल भुटानीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न पनि कलाकारहरू चुकेका छैनन्।
अलिक गम्भीर ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् अभिनेता तथा निर्देशक युवराज लामा। उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसमेत दिने गर्छन्। पछिल्लोपटक उनले भारत भ्रमणमा रहेका अमेरकिी राष्ट्रपति बाराक ओबामाका बारेमा लेखेका छन्। उनको विश्लेषण छ, "ओबामाले दक्षिण एसियाको चावी भारतलाई दिएर गए।" ओबामाबारेको लामो लेखाइमा उनले आफ्नै खाले विश्लेषण गरेका छन्। उनी कतै आध्यात्मिक र कतै दार्शनिक भएर प्रस्तुत हुने गर्छन्। भन्छन्, "फेसबुकमा लेखिएका कुरालाई साथीहरूले अनुमोदन गर्ने वा छडी लगाउने भएकाले मजा आउँछ।" लामाले नेपाली चलचित्रको मात्र होइन, हलिउड र बलिउडका चलचित्रहरूको बक्स अफिस पनि उल्लेख गरििदन्छन्।
फेसबुकमा कति नेपालीको पहुँच होला ? जवाफ हो, छ लाखजति। यो संख्या भनेको कुल नेपालीको दुई प्रतिशतजति मात्र हो। यति भएर पनि नेपाल फेसबुक प्रयोग गर्नेमा ७८औँ स्थानमा पर्छ। यो तथ्यको तुलनामा चलचित्रका कलाकारहरूको संख्या धेरै छ। दुई सयजति कलाकर्मी फेसबुकमा सदस्य छन्। तर, धेरैजसोका लागि यो बसिबियाँलोजस्तो मात्रै छ।
फेसबुकका फाइदा मात्रै होइनन्, बेफाइदा पनि छन्। ती बेफाइदा सिनेकर्मीहरूले पनि भोग्नु पररिहेको छ। कतिपय कलाकारले आफ्ना नाममा खोलिएका नक्कली 'अकाउन्ट'को मार झेल्नु पररिहेको छ भने धेरैले 'ट्याग'को प्रकोप पनि खेप्नुपरेको छ। अरूले 'ट्याग' गरििदने अनावश्यक सामग्री, इन्टरनेट लिंक र तस्िबरका कारण कलाकारहरू हैरान छन्। अभिनेत्री रेखा थापा एउटा उदाहरण हुन्, जो त्यस्ता हैरानीबाट मुक्तिको कामना गर्छिन्। भन्छिन्, "त्यस्तो हैरानी नहँुदो हो त फेसबुक चलाउन झन् रमाइलो हुने थियो।"
कसका बढी साथी ?
कलाकारहरू फेसबुक -इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जाल) साथी बनाउने सवालमा अगाडि छन्। यो अघोषित दौडमा नायिका रेखा थापाले सबैलाई उछिनेकी छन्। उनले प्रशंसकका लागि बनाएको फेसबुक 'फ्यान अकाउन्ट'मा २१ हजार ७ सय ३५ प्रशंसकहरूले रुचाएका छन्। रेखाका छवटा फेसबुक साइट छन्। कुन सक्कली, कुन नक्कली भन्नेमा चाहिँ उनका प्रशंसकहरू झुक्किन सक्छन्।
त्यसो त धेरै कलाकारका एकभन्दा बढी 'अकाउन्ट' छन् फेसबुकमा। कतिले जानेर र कतिले थाहा नपाई धेरैवटा अकाउन्ट झेल्नुपरेको छ। निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता युवराज लामाले भने जानेरै दुईवटा अकाउन्ट खोलेका छन्। लामा युवराज फिल्म मेकर र युवराज लामा गरी उनले २ हजार १ सय २५ जनालाई साथी बनाइसकेका छन्। लामा भन्छन्, "चार महिनामा यत्राविधि साथी बनाएको हुँ, अबको छ महिनामा चार हजार कट्छन् होला।"
न्ाायक राजबल्लभ कोइरालाको मित्र संख्या पनि अरूको तुलनामा धेरै छ। उनी ३ हजार ४ सय २ जनालाई साथी बनाएर बसेका छन्। चलचित्रमा जस्तै राजबल्लभभन्दा अगाडि छन् अर्का नायक आर्यन सिग्देल। उनका साथीको संख्या ५ हजार ६ सय २४ छ। त्यसो त उनका पाँचवटा 'अकाउन्ट' छन्। उनी निकैअघिदेखि इन्टरनेट प्रयोग गर्ने थोरै कलाकारमध्ये एक हुन्।
न्ाायिका करश्िमा मानन्धरका दुईवटा साइट छन्। त्यसमध्ये ३ हजार ७४ साथी भएको उनको अकाउन्ट असली हो। नायिका निरुता सिंहका पनि छवटा अकाउन्ट छन्। एउटा अकाउन्टमा उनका १ हजार १ सय २० साथी छन्। अन्य नायिकाहरूमा रेजिना उप्रेतीका ४ हजार ८ सय ३७, अरूणिमा लम्सालका २ हजार ४ सय ७९, झरना थापाका ७ सय ८९ र नन्दिता केसीका ३ हजार १ सय ४७ साथी छन्। नायिकाहरूमा सबैभन्दा अगाडि छन् नीशा अधिकारी। उनी नियमित फेसबुक अपडेट गर्छिन्। उनका साथीको संख्या ४ हजार ५ सय ८९ पुगेको छ। नीशाले फोटो ग्यालरी पनि बनाएकी छन्, फेसबुकमा। फेसबुकमा अभ्यस्त अर्की नायिका हुन्, ऋचा घिमिरे। उनका दुईवटा 'अकाउन्ट' खुला छन्। त्यसमध्येको एउटामा ५ हजार ७ सय १८ साथी छन्। न्ाायकहरूमा राजेश हमालका छवटा 'अकाउन्ट' छन्। उनको वास्तविक साइट कुन हो, पहिचान गर्न गाह्रो पर्छ।